काठमाडौँ उपत्यकामा लगातार २ दिन सार्वजनिक बिदा !
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । बैशाख २९ शनिबार भएकाले स्वभाविक सह्प्ताहिक सार्वजनिक विदाको दिन नै भयो। त्यसैगरी बैशाख ३० आइतबार पनि एउटा पर्व परेका कारणले सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ।
बैशाख ३० गते आइतबार मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेको हुँदा उक्त दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा हुने गर्छ। योसँगै राजधानी काठमाडौँमा लगातार २ दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएको छ । मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जाउलाखेल पुर्‍याएको चौथो दिनमा भोटोजात्रा हुने पुरानो प्रचलन छ।
त्यसैकारणले काठमाडौँ उपत्यकामा लगातार शनिबार र आइतबार गरी २ दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २७, २०७५१८:५०
इसाई धर्मको प्रचार गर्दै हिँडेका ८ पक्राउ
कुसुण्डा भाषाका संरक्षणक राजामामा कुसुण्डाको शवमा छोरीले दागबत्ती दिइन्
सेवाग्राहीको चाप उच्च भएपछि श्रम इजाजत लिन अब अनलाइनमै टोकन !
हराएका १९ मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाइयो
यी पाँच मन्त्रालयका निकायले गरेनन राम्रो काम ! जनताको बढ्यो गुनासो !